A mid aad u fudud, weli aad wax ku ool, saamayn badalayaan xawaaraha video clip ah. Tani waxay noqon kartaa hal-dheeri ah weli-jir (oo loo yaqaan "jir Xayiraadda") ama ciyaaro clip a dhaqaaq tartiib ah ama si degdeg ah.
Maqaalkani waxa uu idin tusiyo sida loo sameeyo tan isticmaalaya Final Cut Pro X.
A weli-jir fariisiyo tallaabo. Tusaale ahaan, halkan waa clip ah hummingbird qaadanayo diyaar u ah inay dalka ku soo farcama shimbir. Waxaan doonayaa in aan abuuro debcinta-jir shimbirta horyaalka. (Um, haa, waxaan u isticmaali "hakinta-jir" iyo "weli-jir" badadanaa.)
In Final Cut Pro X, geliyey playhead (ama skimmer) sudhaan aad rabto inay hakiso iyo Xulashada nooca + F.
Tani waxay abuurtaa ah laba-labaad debcinta-jir ee booska uu ka playhead ah.
Dheellitir muddada jir by falinjeeerka ku laayeen; sida clip kasta oo kale. Halkan, tusaale ahaan, waxaan samaynta mudada ka mid ah hakinta-jir 11 looxyada gaaban.
Haddii aad la yaabeen, taasi waa waxa la xanibay ay u eg. Waxaa laga fariisiyo horyaalka ee hummingbird ee dhexe ee loo maqli karo, noo ogolaaday in lagu daro naqshadeynta ama text kale ka dibna dib u tallaabada sidii ay waxba ka dhacay.
Aad u qabow, marka laga reebo ....
Waa hagaag, waxaa war fiican ah in tani ay tahay fudud oo degdeg badan. Warka xumina waxa weeye in aynaan ka bedeli kartaa meesha uu ku yiilleen weli.
Sidaas, halkan hab kale oo taas loo sameeyo.
Ku rid playhead (ama skimmer, lakiin waxaan ka doorbidayaa playhead ah) qaado sudhaan aad rabto inay hakiso, dooro clip ah, ka dibna ku qor Shift + F.
Tani caasimadii il clip ee Browser ah, doorteen labada Browser iyo clip ah, iyo kulan jagada In, Out, iyo playhead ah.
Hadda, iyadoo Browser ee la doortay, Xulashada nooca + F. Tani waxay abuurtaa ah hakinta-jir ah clip Browser ah oo meelaha goobta of playhead sida clip ah oo ku xiran in Timeline ah.
Sida clip ah ugu xiran, aan la dhaqaajin karin cusub debcinta-jir meel kasta oo aan dooneyno. Si kastaba ha ahaatee, taxaddar ku biiro clip ah, sababta oo ah, haddii aad u fiirso jir asalka heyna (nooca "M"), ma jirto hab fudud si ay u dhigma jir ah weli la jir isha, mar jir ah weli waxaa u dhaqaaqay meel kale.
Waxaan u isticmaali kuwaas oo labada farsamooyinka mashaariic badan oo kala duwan.
Jire ah U
Jir ah hakad ayaa la mid ah ah ee-line weli jire ah, laakiin la dabacsanaan dheeraad ah.
Ku rid playhead (ama skimmer) sudhaan aad rabto in aad qaban. Markaas, markaas, la isticmaalayo wax ka beddelo> Retime ama "Smurf-on-a-headset" Toolbar icon, dooran Qabo jir ah (ama nooca: Shift + H).
Tan waxay ku tusaysaa bar ah orange Retime editor kor ku clip ah, iyadoo qayb yar oo cas oo muujinaysa jir Qabasho ah.
Beddel muddada jir Qabasho oo ay jiidayeen suulka yar dhamaadka midig ee bar cas.
Add a guurka sagxada xawaaraha dhamaadka jir Qabasho adigoo gujinaya fallaadha midhona kor-fiiqaya soo socda in erayga "Ku hay" in Editor Retime ah.
Si aad u bedesho jir dhabta lagu hayo, double-riix icon bar ah xagga bidixda ka ah qaybta Qabasho cas iyo dooran Source jir ah (Edit). Tani waxay u ogolaaneysaa in aad simbiriirixan doorashada jir Qabashada bidix ama midig.
FIIRO GAAR AH: Beddelidda jir isha wax yaabahan in aan in badan jeclahay!
Gaabis ah (ama DHAQSIYAHA BADAN) CODSIGA
Waxaan u isticmaali gaabis-dhaqaaq si ay u muujiyaan dhacdooyinka si deg deg ah loogu isha madax bannaani ah si aad u aragto yihiin. Iyo dhaqaaq dhakhso ah ay u dardar dhacdooyin aad u gaabis ah. Labada of saamayntooda isticmaali waxa loo yaqaan "isbeddel xawaare joogto ah," halkaas oo dhan clip isbedel by tiro la mid ah - sidoo kale si degdeg ah ama gaabis ah.
WAXAAN abuuro labada saamayn la isticmaalayo qalab la mid ah, oo kaliya qiimaha lagu kala duwanaanta. Halkan sida.
Dooro clip kan ay xawaare aad rabto in aad beddesho. Markaas, la isticmaalayo wax ka beddelo> Retime ama "Smurf" Toolbar icon, dooro gaabis ah (ama Fast).
Dooro mid ka mid ah xawaare la heli karo; kiiskan, 50%. (Haa, waxaad bedeli kartaa in qiimaha kasta oo aad rabtid, waxaana idin tusin doonaa sida daqiiqadii ah.)
Saddex wax u dhacaan hal mar:
Muddada isbedel clip ah
The bar orange Retiming u muuqataa in ka badan sare ee clip ah
Xawaaraha ee isbedel clip ah
Si aad dib xawaaraha si caadi ah (100%) dib, guji fallaadhiina waxay hoos u-ku fiiqaya in bar Retiming iyo dooran caadiga ah (100%).
Waxaa jira laba siyaabood oo loo beddelo xawaaraha clip ah.
Habka ugu sahlan waa in ay la wareegaan riixo yar dhamaadka clip iyo midig ama bidix jiidayo. Xawaaraha beddeli doonaa sida aad u jiidi.
Ama, u sax dheeraad ah, guji fallaadhiina waxay hoos u-ku fiiqaya in bar Retiming iyo dooran Custom.
Waxa uu kuu furayaa wada hadal cusub jidaynayey tiro ka mid ah isbedel:
Reverse. Ciyaaraa clip ee dambe.
Rate. Dooro isbedel gaar ah xawaaraha boqolkiiba ee xawaaraha caadiga ah ee clip ah. In ka yar 100% waa gaabis-dhaqaaq. In ka badan 100% waa dhakhso-dhaqaaq.
Duration. Dooro muddo gaar ah clip iyo FCP X a xisaabin doonaa sida degdeg ah ama hakin ay u baahan tahay si ay u tagaan.
Udhaqaajiyaa. Marka la hubiyaa, habaysaa muddada clip ah oo ku saleysan xawaaraha. Marka laga qaban, muddo clip ah ayaa weli go'an xitaa marka isbedel xawaaraha.
Waxaad ka heli doontaa isbedel xawaaraha smoothest markii boqolkiiba aad doorato kala siman galay 200. Tusaale ahaan, 100, 66, 50, 40, 33, 25, 20, 10 iyo wixii la mid ah.
Dhibco waxbarasho dheeraad ah
Waxaa jira hal meel si ay u eegaan marka ayuuna clip ah. (Tani ma khusayso marka la samaynayo dhaqaaq dhakhso ah.)
Isticmaalka, mar kale, sidoo kale wax ka beddelo> Retime ama "Smurf" menu, dooro Tayada Video.
Caadi ah. Tani waa doorashada ugu fiican ee u xawaare ah 50% ama ka dhaqso.
Jire qasayso. Tani waa doorashada ugu fiican ee u xawaare ah oo ku saabsan 20% ilaa 50%.
Flow indhaha. Tani waa doorashada ugu fiican ee u xawaare gaabis ka badan oo ku saabsan 20%.
Qasayso jir ah dhigeysa gaaban milmi dhexeeya loox markii socda dhaqaaq tartiib ah si loo hagaajiyo khayaal ah ee mooshinka. Indhaha Flow abuurtay in-u dhexeeya loox si loo yareeyo jerkiness ee dhaqdhaqaaq aad u gaabis ah.
Qasayso jir ah waa mid fudud oo degdeg badan. Indhaha Flow eegi doonaa fiican kiisaska intooda badan, laakiin wuxuu qaadanayaa muddo dheer in la taabto.
Haddii aad rabto in aad clips si aad u dardar, hoos ama stop Caraabaah oo kaliya, Final Cut Pro X dhigaysa nidaamka oo dhan fudud.
Oo haatan waad garanaysaa sida roon.
> Resource > FCP > Final Cut Pro X: baaqiga-Frames iyo Motion gaabis ah